Terrafugia ရဲ့ ပထမဆုံး မိုးပျံကားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ရောင်းချမည် | Myanmar Mobile App
Home Uncategorized Terrafugia ရဲ့ ပထမဆုံး မိုးပျံကားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ရောင်းချမည်
Terrafugia ရဲ့ ပထမဆုံး မိုးပျံကားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ရောင်းချမည်
*** VIDEO AVAILABLE *** UNSPECIFIED - UNDATED: The Transition could covert fromaplane toacar in under one minute. A HIGH-flying company is hoping that futuristic airborne cars will soon becomeareality. Massachusetts-based Terrafugia, which was founded in 2006 byateam of MIT graduates, plans to start selling its flying car, named the TF-X, in as little as eight years. And the manufacturer expects to have developed full-size unmanned prototypes of the TF-X by 2018. The innovative vehicle wouldn't look out of place in the iconic film franchise Back to the Future. The TF-X is still in the early stages of development but Terrafugia, which is derived from the Latin for escape the earth, predicts production in the next 8-12 years. PHOTOGRAPH BY Terrafugia / Barcroft Cars UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 796 2458 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4053 2429 W www.barcroftindia.com (Photo credit should read Terrafugia / Barcroft Cars / Barcroft Media via Getty Images)
Terrafugia က Transition မိုးပျံကားကို ဖန်တီးနေတာ နှစ်များစွာ ကြာနေပါပြီ။ အခုတော့ သူ့ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ရောင်းချပေးတော့မယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီကားကို ရောင်းမယ့် အချိန်ကို အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် ယခင်ကထက်တော့ တိကျတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိခဲ့ပါပြီ။ နောက်ထပ် လအနည်းငယ်လောက် စောင့်လိုက်ရင် အဲဒီကားမှာ ပိုမို တိုးတက်မှုများ ပါလာနိုင်ပါတယ်။
Transition ဟာ လက်ရှိမှာ လစ်သီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ အပြင် ဂတ်စ် စွမ်းအင်ဖြင့် ပေါင်းစပ် မောင်းနှင်တဲ့ Hybrid Mode ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ စွမ်းအင် အပိုကို ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ Boost Option လည်း ပါလာပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ လက်တွဲဖက် Dynon နဲ့ BRS တို့ဟာ လေထီးစနစ်နဲ့ အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ အတွင်းပိုင်း ထိုင်ခုံများဟာလည်း ပိုမို တိုးတက်လာပါတယ်။ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Interface လည်း ပါလာပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းမှာ ခရီးဆောင်အိတ်ထားဖို့လို နေရာအပိုများ ထွက်လာအောင်လည်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ထိုင်ခုံ ခါးပတ်နဲ့ လေအိတ်တို့လို ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကိရိယာများဟာလည်း တိုးတက်လာပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ Terrafugia ကို ၀ယ်ယူထားတဲ့ Volvo ရဲ့ မိခင် ကုမ္ပဏီ Geely က ဈေးနှုန်းကို သတ်မှတ်မယ်လို့ သတင်းများက ဆိုပါတယ်။ Terrafugia ဟာ အခုဆိုရင် အရင်က မရရှိဖူးတဲ့ အဆက်အသွယ်များနဲ့ အစိတ်အပိုင်း ထောက်ပံ့မှုများကို ရရှိနေပါပြီ။ မိုးပျံကားကို ရောင်းချနိုင်ဖို့ အလွန် ကောင်းတဲ့ တွန်းအားများ ဖြစ်ပါတယ်။
Terrafugia ရဲ့ ပထမဆုံး မိုးပြံကားကို ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ ရောငျးခမြညျ
Terrafugia က Transition မိုးပြံကားကို ဖနျတီးနတော နှဈမြားစှာ ကွာနပေါပွီ။ အခုတော့ သူ့ကို ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ ပထမဆုံး အကွိမျ အဖွဈ ရောငျးခပြေးတော့မယျလို့ ကုမ်ပဏီက ကွညောလိုကျပါတယျ။ ဒီကားကို ရောငျးမယျ့ အခြိနျကို အတိအကြ မသိရသေးပမေယျ့ ယခငျကထကျတော့ တိကတြဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ရရှိခဲ့ပါပွီ။ နောကျထပျ လအနညျးငယျလောကျ စောငျ့လိုကျရငျ အဲဒီကားမှာ ပိုမို တိုးတကျမှုမြား ပါလာနိုငျပါတယျ။
Transition ဟာ လကျရှိမှာ လဈသီယမျ အိုငျးယှနျး ဘကျထရီ အပွငျ ဂတျဈ စှမျးအငျဖွငျ့ ပေါငျးစပျ မောငျးနှငျတဲ့ Hybrid Mode ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ စှမျးအငျ အပိုကို ထုတျလုပျနိုငျတဲ့ Boost Option လညျး ပါလာပါတယျ။ ကုမ်ပဏီရဲ့ လကျတှဲဖကျ Dynon နဲ့ BRS တို့ဟာ လထေီးစနဈနဲ့ အီလကျထရောနဈ အစိတျအပိုငျးမြားကို ထောကျပံ့ပေးနပေါတယျ။ အတှငျးပိုငျး ထိုငျခုံမြားဟာလညျး ပိုမို တိုးတကျလာပါတယျ။ စှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ Interface လညျး ပါလာပါတယျ။ အတှငျးပိုငျးမှာ ခရီးဆောငျအိတျထားဖို့လို နရောအပိုမြား ထှကျလာအောငျလညျး ပွုလုပျထားပါတယျ။ ထိုငျခုံ ခါးပတျနဲ့ လအေိတျတို့လို ဘေးကငျးလုံခွုံရေး ကိရိယာမြားဟာလညျး တိုးတကျလာပါတယျ။
စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက ဈေးနှုနျး ဖွဈပါတယျ။ Terrafugia ကို ဝယျယူထားတဲ့ Volvo ရဲ့ မိခငျ ကုမ်ပဏီ Geely က ဈေးနှုနျးကို သတျမှတျမယျလို့ သတငျးမြားက ဆိုပါတယျ။ Terrafugia ဟာ အခုဆိုရငျ အရငျက မရရှိဖူးတဲ့ အဆကျအသှယျမြားနဲ့ အစိတျအပိုငျး ထောကျပံ့မှုမြားကို ရရှိနပေါပွီ။ မိုးပြံကားကို ရောငျးခနြိုငျဖို့ အလှနျ ကောငျးတဲ့ တှနျးအားမြား ဖွဈပါတယျ။
Previous articleအနောက် ကင်မရာ ၂ လုံး၊ Notch နဲ့ Pure Android ပါတဲ့ Nokia X5 ကို ကြေညာပြီ
Next articleXiaomi Mi Max3– 5,500mAh ဘတ်ထရီအားသွင်းချိန်ကြာတယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲ